फेरि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत
मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसकेकाले तत्काल नै निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले संसद्ले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनुभएको हो।सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित […]
राष्ट्रपतिलाई अध्यक्ष केसीको प्रश्न : संसद विघटन गर्नुअघि किन छलफल गर्नुभएन ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसद विघटन गर्नुअघि सर्वदलीय बैठक किन नराखेको भनेर राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा अध्यक्ष केसीले राष्ट्रपतिलाई सो प्रश्न सोध्नुभएको हो । बैठकमा केसीले सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखबाटै सबैभन्दा धेरै गल्ती भएको बताउनुभएको थियो । राजनीतिक दलहरुका कारण अहिले प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्न लागेको भन्दै उहाँले चिन्ता जाहेर गर्नुभयो । केसीले अहिलेको अवस्था कसरी आयो भनेर जिम्मेवार नेताहरुले आफैँ विचार गर्नुपर्ने भन्दै सत्ता र विपक्षी दलका नेताहरुलाई सच्चिन आग्रह गर्नुभएको थियो । बैठकपछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै केसीले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रप्रमुख पनि सरकार प्रमुखलाई पनि पुग्नेगरी मैले भनेको छु । २०६२–६३ सालमा जुन उपलब्धि भयो, यीनै राजनीतिक पार्टीका कारणले यो उपलब्धि फेरि गुम्नेवाला छ । गणतन्त्रमा कालो बादल मडारिसकेको छ । यसको कारण राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखबाट बढी गल्ती भएको छ भने मैले ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले गरेको संसद विघटन सही थियो भन्ने जिकीर गर्नुभएको थियो । उहाँले ताजा जनादेश लिन चुनावमा जानुपर्ने बताएको बताउनुभएको थियो । बैठकमा पूर्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो, राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, नेमकिपाका प्रेम सुवाल लगायत सहभागी थिए । बैठकमा सहभागी भएका नेताहरुमध्ये प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने मौन रहेको बताइन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी चैत ९ र १० गते बंगलादेशको राजकीय भ्रमणमा जाने बारे जानकारी गराउन सर्वदलीय बैठक आव्हान गर्नुभएको हो । बंगलादेशको स्वतन्त्रताको स्वर्ण जयन्ती तथा बंगलादेशका संस्थापक शेख मुजिबर रहमानको शतवार्षिकीको अवसरमा बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति भण्डारी आगामी चैत ९ गते त्यसतर्फ जान लाग्नुभएको हो ।
Yug Darshan 1 महिना पहिले
संसद बैठक बस्नुअघि सांसदले कोरोना खोप लगाउनुपर्ने, ३ दिनको समय तोकियो
काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेसँगै संघीय संसद सचिवालयले आवश्यक तयारी शुरु गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेका बेला संसद सचिवालयले सबै सांसद, कर्मचारी, मर्यादापालक, सञ्चारकर्मीलाई खोप लगाउन ३ दिनको समय तोकेको छ। सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा फागुन १९ गते बुधवारदेखि सिभिल…
अब के हुन्छन् ‘सांसद विकास कोष’का योजना?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सांसद विकास कोषका नामबाट परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’अन्तर्गतका योजना के हुन्छन् ? सांसददेखि कार्यक्रमबाट लाभान्वित नागरिकसम्मको चासो छ । संसद् विघटन भए पनि...
न्यायाधीशले सोधे : संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन ?
८ माघ, काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उठेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने सूचना जारी गरेकी थिइन् । तर उक्त सूचना राजपत्रमा आजसम्म आफूले नदेखेको भनी अधिवक्ताहरुले इजलासमा प्रश्न उठाएका छन् । अधिवक्ता […]
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद विघटनबारे किन मुख खोले ?
२४ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सामूहिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भएको उनीहरूको साझा निश्कर्ष छ । ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि […]
संसद विघटनबारे साहित्यकारको दुई धार : कोही सत्तामा, कोही सडकमा
२० पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै सिङ्गो देश दुई कित्तामा विभाजित बनेको छ । यो विभाजनले साहित्यकारहरुलाई पनि छोएको छ । ओली पक्षधर नेताहरूले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्दै बचाऊ गरेका छन् भने, अर्को पक्षले यसलाई लोकतन्त्रमाथि भएको निर्मम हमलाको संज्ञा दिएको छ । राजनीतिक तरंगले देश तातेका बेला नेपालका […]
संसद विघटन साहसिक कदम : बादल
१८ पुस, काठमाडौं । नेकपा ओली समूहका नेता रामबहादुर थापा बादलले संसद विघटन साहसिक कदम भएको बताएका छन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर राजनीतिक कू गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने राजनीतिक कदम चालेको उनले बताए । ओली समूहको काठमाडौं जिल्लास्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री समेत रहेका बादलले भने, ‘बाहृय […]
संसद विघटनविरुद्ध सडक नाटक प्रदर्शन
१८ पुस, काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको बृहत नागरिक आन्दोलनले माइतीघर मण्डलामा नाटक प्रदर्शन गरेको छ । संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै शनिबार कलाकारहरूले विरोध नाटक देखाएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ । आन्दोलनका सहभागीहरूले ‘सावधान जनता, […]
संसद विघटनको विरोधमा माइतीघरमा घन्कियो च्याब्रुङ
१७ पुस, काठमाडौं । असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै काठमाडौं, माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ । संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दा बृहत नागरिक आन्दोलनले शुक्रबार च्याब्रुङ सहित प्रदर्शन गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको संसद तत्काल पुनस्र्थापना हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध […]
संसद् विघटन भयो, अब न्यायालयको भर !
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले संसद् विघटन